Dzimwe nguva izwi kukanganiswa rine chirevo chisina kunaka. Ini handitende kuti kushambadzira kwedhijitari nhasi kuri kuvhiringidzwa nechero tekinoroji yazvino, ndinotenda iri kukwidziridzwa nayo. Vashambadziri vanoshandura uye vanotora matekinoroji matsva vanokwanisa kugadzirisa, kuita, nekubatana netarisiro yavo nevatengi nenzira dzinonyanya kukosha. Mazuva echikwata uye ekuputika ari kuchinja shure kwedu sezvo masisitimu ari kuita nani pakuratidzira nekufungidzira hunhu hwevatengi nemabhizinesi.
Iyo Inoshamisa Yekutengesa Mukana Kuuya neIoT
Mugovera, Kubvumbi 7, 2018 China, Kukadzi 25, 2021 Douglas Karr
Vhiki kana kupfuura yapfuura ndakakumbirwa kuti nditaure pachiitiko chedunhu paInternet yezvinhu. Sekubatana pamwe kweiyo Dell Luminaries podcast, ini ndanga ndine toni yekuratidzwa kuEdge komputa uye nehunyanzvi hwekugadzira hwatove kutora chimiro. Nekudaro, kana iwe ukatsvaga wekushambadzira mikana maererano neIoT, pane chokwadi hapana hurukuro yakawanda online. Muchokwadi, ndakasuwa nekuti IoT inoshandura hukama pakati
Chipiri, February 27, 2018 Chipiri, February 27, 2018 Douglas Karr
Huwandu hwemidziyo yakabatana neInternet mumba mangu nehofisi inoenderera ichikura mwedzi wega wega. Zvese zvinhu zvatiinazvo izvozvi zvine chinangwa chiri pachena - senge mwenje kudzora, mirairo yezwi, uye zvinogadziriswa thermostats. Nekudaro, kuenderera mberi miniaturization yehunyanzvi uye kubatana kwavo kuri kuunza kutenderedza kukanganiswa kwebhizinesi sezvatisati tamboona. Munguva pfupi yapfuura, ndakatumirwa kopi yeInternet yezvinhu: Digitize kana Kufa: Shandura sangano rako. Gumbatira
Chipiri, Mbudzi 21, 2017 Muvhuro, Mbudzi 20, 2017 Douglas Karr
Isu nguva pfupi yadarika takagovana mimwe mienzaniso yekuti Enterprise IoT (Internet yezvinhu) ingave ine simba rakakura sei mukutengesa kwechitoro. Mwanakomana wangu aingogovana nyaya yenhau neni pazvitoro izvo zvakaratidza zvimwe zvisina kujeka manhamba maererano nekuvhurwa nekuvharwa kwezvitoro. Kunyange hazvo nzvimbo yekuvhara iri kuramba ichiwedzera, zvakakosha kuti uzive kuti nyika ino iri kuramba ichivhura nzvimbo dzekutengesa. Kunyangwe Amazon, iyo inonzi chitoro
Vakweretesi vari kutsigira kubvisa mari iyo yatove inorwara yekutengesa indasitiri. Bloomberg iri kutofanotaura kuti Retail Apocolypse inogona kukurumidza kuve patiri. Iyo indasitiri yekutengesa iri kuziya nehunyanzvi, uye iyo Internet yezvinhu ingangopa kukurudzira kunodiwa. Muchokwadi, 72% yevatengesi parizvino vari kuita Enterprise Internet yezvinhu (EIoT) mapurojekiti. Hafu yevatengesi vese vatove kusanganisira tekinoroji yepedyo mukushambadzira kwavo. Chii chinonzi EIoT? Mune mabhizinesi anhasi, kuwedzera